PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပရန် ကန့်သတ်နယ်မြေများတွင် ကရင်ပြည်နယ် အများဆုံး .
ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပရန် ကန့်သတ်နယ်မြေများတွင် ကရင်ပြည်နယ် အများဆုံး .
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ ကရင်၊ ကချင်၊ ကယား၊ မွန်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ နယ်မြေအချို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်း ပခြင်းမပြုရန် ယမန်နေ့က တရားဝင် စာရင်းများ ထုတ်ပြန်လိုက်ရာ ကရင်ပြည်နယ်သည် ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၁၅၅ ဖြင့် အများဆုံး ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
နေပြည်တော် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်မှ စက်တင်ဘာလ ၁၆ရက်နေ့စွဲဖြင့် ကြေညာချက် အမှတ် ၉၉/၂၀၁၀ ကချင် ပြည်နယ်တွင် လည်းကောင်း၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၁၀၀/၂၀၁၀ ကယားပြည်နယ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၁၀၁/၂၀၁၀ ကရင် ပြည်နယ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကြေညာချက်အမှတ် ၁၀၂/၂၀၁၀ မွန်ပြည်နယ်တွင်လည်းကောင်း၊ ကြေညာချက် အမှတ် ၁၀၃/ ၂၀၁၀ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်လည်းကောင်း စသည့် ပြည်နယ် ၅ခုမှ ကျေးရွာအချို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်းမပြုရန် ယမန်နေ့ ညနေပိုင်းက မြန်မာ့အသံမှတဆင့် ထုတ်လွှင့်ကြေညာခဲ့သည်။
ထိုပြည်နယ် ၅ခုထဲမှ မြို့နယ် ၄ခုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း (၃၀၀)ခန့်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပရန် ကန့်သတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး ကရင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မှ နယ်မြေများ အများဆုံးပါဝင်ပြီး မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပ နိုင်သည်ကို ထုတ် ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။
ကြေညာချက် အမှတ် ၁၀၁/၂၀၁၀ အရ ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ဖားအံမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၁၁)စု၊ လှိုင်းဘွဲ မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၁၇)စု၊ ဖာပွန်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၂၇)စု၊ သံတောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၃၆)စု၊ မြ၀တီမြို့နယ် တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၄)စု၊ ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု(၁၄)စုနှင့် ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု (၄၆) စုတို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သည့် ဒေသများအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်ဟု ပါရှိသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရက ယခုလို မဲဆန္ဒနယ်အတော်များများကို ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပရန် ကန့်သတ်လိုက်ခြင်းသည် ၎င်းတို့ အနိုင်ရရှိ ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယခုရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်သည့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (ကေအဲန်ယူ) တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး-၁ ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက ယခုလို ဝေဖန်သုံးသပ်သည်။
သူက “အဓိကတော့ သူတို့ (နအဖ)အနိုင်ရဖို့အတွက်ပဲ။ အဲဒီဒေသတွေမှာရှိတဲ့ လူထုတွေက သူတို့ကို ထောက်ခံမဲပေးမဲ့ လူတွေ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် လုံခြုံရေးအတွက် အကြောင်းပြပြီးတော့ ဖယ်ရှားလိုက်တာဖြစ်တယ်။ သူတို့အတွက် အရှုံးမရှိဘူး။ ကျန် တဲ့ဒေသတွေမှာ ၀င်ရောက်အရွေးခံမဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကို သူတို့လှည့်ချင်သလို လှည့်လို့ရတယ်။”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
ထိုဒေသများအတွင်း စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်သည့် ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ)တပ်ဖွဲ့များ၊ နယ်ခြားစောင့် တပ်များ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကို ငြင်းဆန်နေသည့် ဒီကေဘီအေတပ်ဖွဲ့များနှင့် နအဖတပ်များ တည်ရှိ နေသည့်အတွက် မကြာခဏ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေသဖြင့် ယခုလို ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပရန် ကန့်သတ် လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူထု များက ယူဆနေကြသည်။
ကော့ကရိတ်နယ်သားတဦးက “သူတို့ (နအဖ) လာလုပ်ဘယ်ရဲမလဲ။ ဒီဘက်ကလူ(ကေအဲန်ယူ)တွေ သူတို့ကို တိုက်ခိုက်မှာ စိုးရိမ် လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုလည်း နယ်စပ်မှာ တိုက်ပွဲ ခဏခဏဖြစ်နေတော့လေ။”ဟု ကေအိုင်စီကို ပြောသည်။
အလားတူ အခြား မွန်၊ ကယား၊ ကချင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်တို့်တွင်လည်း စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်သည့် တိုင်းရင်းသား လက် နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးအစီအစဉ်ကို ငြင်းဆန်နေသည့် အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ ရှိနေ သည့်အတွက် စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် ခက်ခဲနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်သူများလည်း ရှိသည်။
ကရင်ပြည်နယ်တွင် မဲဆန္ဒနယ်မြေ ၇ခုရှိပြီး ပြီးခဲ့သည့် ၁၉၉၀ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ၌လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ နယ်မြေအေးချမ်းမှု မရှိဟု ယူဆရသော မဲဆန္ဒနယ် ၇ခုတွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သတင်း ရင်မြစ် - ကေအိုင်စီ